चाैबिस घण्टामा उपत्यकाबाट सतचालिस हजार यात्रु बाहिरिए ! - नेपालबहस
२२ असोज काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार गएको २४ घण्टामा उपत्यकाबाट ४६ हजार ८ सय १९ यात्रु बाहिरिएका छन् ।
यस्तै ३२ हजार ४ सय ५४ जना यात्रु उपत्यका भित्रिएका महाशाखाले जनाएको छ । दशैँको अघिल्लो दिनसम्म साढे २५ लाख यात्रु बाहिरिएका थिए । दशैँको पछिल्लो दिनपनि भित्रिनेभन्दा बाहिरिनेको संख्या नै धेरै रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
यसैबिच, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दशैंको नवमीसम्म सुनसान रहेको काठमाडौं उपत्यका दशैंको टिकाको दिनदेखि केही चहलपहल सुरु भएको छ ।
दशैंको अवसरमा आफन्त कहाँ टिका, जमरा र आर्शिवाद थाप्न जानेहरुको कारण केही दिन सुनसान जस्तै भएको काठमाडौं टिकाको दिन मंगलबारदेखि नै चहलपहल सुरु भएको हो । अब विस्तारै जिल्लातिर दशैं मनाउन गएका पनि फर्किने क्रम सुरु भएकाले चहलपहल बढ्दै जाने प्रहरीको भनाइ छ ।
अघिल्लो लेखचितवनमा रात्रिबस दुर्घटना : ३८ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
अर्को लेखदेशका केही ठाउँमा चट्याङसहित पानी पर्ने
भोली यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस है जोर नम्बरका सवारी मात्रै गुड्छन् !